1. မျက်နှာအလေးချိန်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးရမလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသွယ်လျပြီးပုံသဏ္lookာန်အပြင်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားသင်ကိုယ်တိုင်မည်မျှဂရုစိုက်သည်ကိုပြောပြသည့်တံခါးသို့သွားရန်ကူညီရန်အရေးကြီးသည်။ လူအများစုကအလုပ်မလုပ်သောကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းရန်နည်းလမ်းရှာရန်ကြိုးစားကြသည်။ ထိုအခါမူကား,!!! မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပါးပြင်ကျယ်ပါးပါးများ၊ လည်ပင်းအကာများကကြာမြင့်စွာနေလိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေတဲ့အထိ အဘယ်သူသည်အတော်လေးအနည်းငယ်ကိုယ်အလေးချိန်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါပြောနိုင်တယ် သင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည့် (ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနည်း) မျက်နှာကိုမည်သို့ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းသင်သာသိသည်။ သင့်မျက်နှာကပါးလွှာနေလိမ့်မယ် သင်သည်အထိသင်ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိနိုင်သည်
2. ရိုးရှင်းသောဆန်ဖြူ၊ သန့်စင်ပြီးသကြားဓာတ်၊ သရေစာ၊ ရေခဲမုန့်စသည့်ရိုးရှင်းသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချပါ။ ဘယ်ဆိုဒီယမ်မြင့်မားမှုနှုန်းပါလိမ့်မယ် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မျက်နှာနှစ်ခုလုံးတွင်ဖောဖြစ်ပေါ်စေသည် ကာဗွန်နိမ့် (Carbs Low Diet) စားသုံးခြင်းဖြင့်မည်သူကမျက်နှာအလေးချိန်ကျမည်နည်း၊ ကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအာဟာရဓာတ်များကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၁၄ ရက်သာပြောင်းပါ။ မျက်နှာမျက်နှာပြင်ကျခြင်း၏ရလဒ်များကို ပို၍ ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
3. ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပါ သင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိအဆီပိုလျှံမှုကိုလျော့ချရန်အတွက်လက်သည်းစည်းမျဉ်းသည်သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိအဆီပိုလျှံခြင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အဆီပိုများခြင်းမှစွမ်းအင်ထုတ်ယူသောလုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်မျက်နှာအလေးချိန်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ 15 မိနစ်နောက်ပိုင်းတွင် နှလုံးခုန်နှုန်းမှာတစ်မိနစ်လျှင် ၁၃၀ မှ ၁၅၀ ခုန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုလျှံသောကိုယ်ခန္ဓာအဆီနှင့်ပါးပြင်များကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ရိုးရိုးဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစားသုံးခြင်းနှင့်တွဲဖက်။ ရက်ပေါင်း ၃၀ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သောအခါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုထိရောက်စွာမျက်နှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးကူညီလိမ့်မယ်။
4. မျက်နှာအဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်မျက်နှာဖုံးအဆီ ဒါဟာမျက်နှာကိုအလေးချိန်ဆုံးရှုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပါးစပ်, ဒစ်, ပါးနှင့်နှုတ်ခမ်းလုပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ခေါင်းကိုစောင်းပါ။ လည်ပင်းနှင့်မေးစေ့ကိုဆန့်ခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ ကြိမ်နေ့စဉ်၊ နံနက်အချိန်နှင့်အိပ်ရာမ ၀ င်မီရက် ၃၀ အစဉ်မပြတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာအလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
5. အနှိပ်ခိုင်မာ မျက်နှာအလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်ဤနည်း ကျွန်ုပ်တို့သည်နံနက်ခင်းနှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်တို့တွင်မျက်နှာအနှိပ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပေါ်ရှိအရေးကြီးသောအချက် ၅ ချက်မှာနဖူး၊ ပါး၊ နှာခေါင်း၊ မေးစေ့တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မေးစေ့ပေါ်ရှိလက်မနှစ်ဖက်လုံးကိုသုံးပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဘုရားကျောင်းများကိုနေရာချ။ နေရာချပါ။ ထို့နောက်သင်၏လက်မကိုတဖြည်းဖြည်းသုံးပါ V- ပုံသဏ္intoာန်သို့တက်ဒူးထောက်။ ထို့နောက်ပါးသို့ရောက်သည့်အခါနဖူးအထိ ပို၍ အနှိပ်ခံသည်။ ထို့နောက်သင်၏လက်မကိုတဖြည်းဖြည်းသုံးပါ ဆံပင်အပေါက်အထိနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဤနည်းသည်ပါးပြင်ကိုနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပါးကြွက်သားများတင်းကျပ်။ မျက်နှာအလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်။
6. မျက်နှာအလေးချိန်ကိုဘယ်လိုလျော့ချမလဲ၊ အဲဒါသိပ်ခက်တယ်မဟုတ်လား အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိသူမည်သူမဆိုတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တိုးတိုးပြောရန်မမေ့ပါနှင့်။ Hmph !! ငါတို့အတူတူမျက်နှာအလေးချိန် ^^ hehe ^^ ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ